च्याम्पियन्स लिग र अद्भुत रोनाल्डो! | Hamro Khelkud
च्याम्पियन्स लिग र अद्भुत रोनाल्डो!
बिहीबार, चैत्र २८, २०७५
एजेन्सी – यूईएफए च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गत बुधबार भएको युभेन्टस र आयाक्सबीचको क्वाटरफाइनलको पहिलो लेग १-१ को बराबरीमा सकियो । उक्त खेलमा युभेन्टसका लागि चोटबाट फर्किएका स्टार फरवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डोले गोल गरे ।
३४ वर्षीय रोनाल्डोले च्याम्पियन्स लिगमा टोलीलाई आवश्यक परेको बेलामा गोल गर्ने आफ्नो नियमित कार्यलाई बुधबार पनि निरन्तरता दिए । सन् २००८ को च्याम्पियन्स लिग फाइनलमा चेल्सीविरुद्ध अग्रता दिलाउने होस् या पछिल्लो सिजन युभेन्टसविरुद्ध जित पक्का गर्न नै होस् । रोनाल्डोले च्याम्पियन्स लिगमा बेग्लै पहिचान बनाएका छन् ।
अझ विशेष भन्नुपर्छ, रोनाल्डोले प्रतियोगिताको मुख्य पाटोमा गोल गर्ने बेग्लै कीर्तिमान कायम गरेका छन् । क्वाटरफाइनल, सेमीफाइनल र फाइनलमा मात्र रोनाल्डोले ४१ गोल गरेका छन् । यो गोल संख्या अन्य खेलाडीको तुलनामा एकदम धेरै हो । उनले फाइनलमा मात्र ३ गोल गरेका छन् ।
रोनाल्डोले क्वाटरफाइनल चरणका २१ खेलमा २४ गोल गरेका छन् । सेमिफाइनल चरणमा १४ गोल गरेका रोनाल्डोले उपाधि भिडन्तमा ३ पटक गोल गरेका छन् । मेसीको तुलनामा रोनाल्डोले २५ गोल बढी गरेका छन् । समग्रमा उनले नकआउट चरणमा आफ्नो गोलसंख्या ६४ पुर्याएका छन् । मेसीले भने नकआउट चरणमा ४२ गोल गरेका छन् । त्यसपछि सुचिमा बायर्न म्युनिखका थोमस मुलर २१ गोल गरेका छन् । रोनाल्डो एक्लैले दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहेका खेलाडीको कुल गोल्संख्यभन्दा बढी गोल गरेका छन् ।
च्याम्पियन्स लिगको गोलसंख्यामा पनि रोनाल्डो शीर्ष स्थानमा नै छन् । उनले १ सय २५ गोल गर्दा दोस्रो स्थानमा रहेका मेसीले १ सय ८ गोल गर्दै उनलाई पछ्याइरहेका छन् । तेस्रो स्थानमा रहेका राउलको ७१ गोल छ ।
नकआउट चरणमा क्लबहरुसँग तुलना गर्ने हो भनेपनि रोनाल्डो अगाडी छन् । रोनाल्डोले ६३ गोल गर्दा इंग्लिस क्लब आर्सनलले ५३ तथा लिभरपुलले ४९ गोल मात्र गर्न सकेका छन् । मेसीले ४२ गोल गर्दा डर्टमुन्ड, पीएसजी र पोर्टोले समान ३८ तथा एटलेटिको म्याड्रिड, इन्टर मिलान र एएस मोनाकोले ३३ गोलमात्र गरेका छन् ।